Nepali Christian Bible Study Resources - बौरिउठाइ र जीवन
» अध्ययन मालाहरू » यूहन्नाको सुसमाचार » यूहन्ना ११
लाजरस _____________ शहरमा बस्दथे (यूहन्ना ११:१), जुन शहर अर्को ठूलो शहर ___________को नजिकै पर्थ्यो (यूहन्ना ११:१८-- बेथानी यरुशलेमबाट पुगनपुग २ माईल टाढा थियो। बाइबल मानचित्रमा हेरेर बेथानी र यरुशलेम भेट्टाउनुहोस्)।
द्रष्टब्यः यशूले लाजरसका निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुराको विचार गर्ने क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नतालाई बुझ्न आवश्यक छ। भविष्यमा हुने विश्वासीहरूको बौरिउठाइ लाजरसको बौरिउठाइ भन्दा धेरै फरक हुनेछ। लाजरस “मृत्युबाट बौरिउठेका थिए” यो साँचो हो (यूहन्ना १२:९), तर “अन्तिम दिन” मा हुने विश्वासीहरूको बौरिउठाइ र लाजरसको घटना उस्तै होइन (यूहन्ना ५:३९,४०,४४,५४)।
लाजरस पुनर्जीवित पारिए (उनलाई फेरि जीवन दिइयो)। लाजरसलाई जीवनमा पुनर्स्थापित गरियो। लाजरस साँच्चै मरेका थिए (यूहन्ना ११:१४) तर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा उनलाई फेरि शारीरिक जीवन दिइएको थियो। तर लाजरसलाई कहिल्यै नमर्ने नयाँ शरीर भने दिइएको थिएन। यद्यपि उनी अब फेरि जिवीत भए र बिरामी थिएनन्, उनी अझै पनि उही शरीरमा नै थिए र कुनै दिन तिनी फेरि मर्नेवाला थिए! येशूले लाजरसको जीवनमा जे गर्नुभयो त्यो छक्कलाग्दो थियो तरैपनि त्यो एउटा अस्थायी कार्य थियो, स्थायी थिएन।
येशूले चेलाहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, उहाँ दिनमा सुरक्षासाथ हिँड्न सक्नुहुन्छ (यूहन्ना ११:९-१०)। आफ्नो मृत्युको घडी अझै आइपुगेको छैन भनेर उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। येशू जान्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले उहाँलाई यस संसारमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई निश्चित समय अवधि दिनुभएको छ। उहाँका शत्रुहरूले यस समयलाई छोट्याउन सक्ने थिएनन् (यूहन्ना १०:१८)। आफ्नो काम गरी नसिध्याइकन उहाँ मर्न सक्नुहुन्न भनेर पनि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा पनि यही साँचो हुन्छ। एउटा विश्वासी जन ज्योतिमा हिँड्दछ र उसको जीवनका निम्ति परमेश्वरको इच्छा उसले पूरा गर्दै छ भने ऊ डराउनुपर्नेछैन। परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूको सुरक्षा गर्नुहुन्छ! मानिसले केही गर्ला कि भनेर के परमf#2375;श्वरको सेवक डराउनु आवश्यक छ (भजनसंग्रह ११८:६; भजनसंग्रह २७:१; हिब्रू १३:६)? __________________।
« असल गोठाला
नम्र दास (भाग १) »